Kafka elunxwemeni, "pop" inoveli okanye ubuchule bokubhala? | Uncwadi lwangoku
I-panorama yangoku yoncwadi lwehlabathi inendawo ebalulekileyo yokubaliswa kukaHaruki Murakami, umbhali we Kafka elunxwemeni (2002). Yonke into ithethiwe malunga nalo msebenzi, ngaphandle kokukhanyela ukuba abafundi balo mbhali waseJapan bawuthandile kangakanani. Kwaye kukuba uMurakami unesitayile esibonakaliswa yimimoya engacacanga, kufutshane nokuthembela okanye ubunyani bobugqi, obunokubakho kule noveli.
Ke ngoko, umntu angathetha ngehlabathi "le-Murakamian", apho ubomi babalinganiswa buyintsingiselo kwaye buyaphazamisa. Inoveli enebali elijolise kubalinganiswa ababini, omnye umncinci kwaye omnye umdala, ubekwe ziimeko zabo.. Ngokomgaqo, amabali abo abonakala ngathi ahlobene, nangona kunjalo, uMurakami wenza indlela enobuchule yokuzibandakanya.
1 Olunye ulwazi malunga nomlobi, uHaruki Murakami
1.1 Ukungcwaliswa koncwadi
1.2 Ezinye iinoveli ezithengiswa kakhulu nguMurakami
1.3 Uncwadi eMurakami: isitayile kunye neempembelelo
2 Isishwankathelo seKafka elunxwemeni
2.1 Ibali elifanayo
3 Uhlalutyo lweKafka elunxwemeni
3.1 Ukufaneleka kwesindululo sakho soncwadi
3.2 Inoveli phakathi komlingo kunye nokwenyani
3.3 Ilizwi elibalulekileyo
3.4 Imixholo enzulu yabantu
Olunye ulwazi malunga nomlobi, uHaruki Murakami
UHaruki Murakami ngumbhali kunye nomguquleli owazalelwa kwisixeko saseKyoto ngoJanuwari 12, 1949, ephenjelelwa kakhulu luncwadi lwaseNtshona. Ngexesha lobuntwana bakhe wafumana imfundo yenkolo yaseJapan neyamaBuddha kuyisemkhulu katata wakhe, ngelixa wayekhula nomama ongumrhwebi. Kamva, Wabhalisa kwiYunivesithi yaseWaseda, apho wayefunda khona iincwadi zamaGrike kunye nomdlalo weqonga.
Kwindlu ekhankanywe apha ngasentla wadibana nenkosikazi yakhe, uYoko. Esi sibini kamva sagqiba ekubeni singabinabo abantwana, endaweni yoko bagqiba kwelokuba bazifumanele iklabhu yejazz eTokyo, ebizwa ngokuba nguPeter Cat. Ke, Ngexesha lomdlalo ukubetha kwibhola kwamkhuthaza ukuba abhale inoveli yakhe yokuqala, Yivani ingoma yomoya (1973).
Iimpapasho zokuqala ezibhaliweyo zikaMurakami zazinenombolo yokuhlela ephantsi. Ngaphandle kwale meko, indoda yaseJapan yeeleta ayizange idimazeke, endaweni yoko yaqhubeka nokwenza izicatshulwa ezingenamida phakathi kwenyani kunye nephupha.
Iminyaka yoo-80 yabona ukumiliselwa IPinball 1973 (1980) y Ukuzingelwa kwenkunzi yegusha yasendle (1982). Ekugqibeleni, kwi1987, I-Tokyo Blues (iNorweigian Wood) wazisa udumo lukaMurakami kwilizwe nakwamanye amazwe. Ukusukela ngaloo nyaka, umbhali waseJapan wapapasha iinoveli ezilithoba, ingqokelela yamabali amahlanu kunye nemibhalo emininzi yeentlobo ezahlukeneyo phakathi amabali anemifanekiso, izincoko kunye neencwadi yeengxoxo.
Ezinye iinoveli ezithengiswa kakhulu nguMurakami
Umdaniso woMdaniso woMdaniso (1988)
Ingxelo yentaka ejikeleza umhlaba (1995)
Ukufa komlawuli (2017)
Uncwadi eMurakami: isitayile kunye neempembelelo
UHaruki Murakami kunye nenkosikazi yakhe bahlala phakathi kweUnited States neYurophu de kwangowe-1995, xa bagqiba kwelokuba babuyele eJapan. Ngeli xesha, ukwamkelwa kwakhe kwilizwe boncwadi kwakusanda. Nangona, ebesele ekho loo meko, wanyeliswa ngamanye amazwi abalulekileyo, eMpuma naseNtshona.
Isicatshulwa sikaHaruki Murakami.
Ukongeza, ukupapashwa kwe Kafka elunxwemeni Ngo-2002 wenza ukuba umbhali we-Kiotense afundwe ngokubanzi kwaye aphakamise udumo awayenalo kangangokuba wade wachongwa kwi-Nobel Prize amatyeli aliqela. Kwelinye icala, iimpembelelo ezibalulekileyo kuncwadi lwakhe ziya kuba ngumculo- ijezi, ubukhulu becala- kunye nengxelo yaseMntla Melika kubabhali abanjengoScott Fitzgerald okanye uRaymond Carver.
Isishwankathelo se Kafka elunxwemeni
Umncinci UTamura uhlala notata wakhe, onobudlelwane obubi naye, ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, Umama wabo nodade wabo babalahla xa enye yayincinci. Kule meko, umlinganiswa ophambili ubalekela ekhaya emva kweminyaka elishumi elinesihlanu. Ewe ngoku uKafka Tamura uya emazantsi, eTakamatsu.
Ngelo xesha kuvela umbuzo ongenakuphepheka: Kutheni le nto umlinganiswa ophambili ebaleka? Ngempendulo, izinto eziqala ukwenzeka ziyaqala, kuba utata kaKafka Tamura utyhola unyana wakhe, njengo-Oedipus Rex, efuna ukumbulala ukuze alale nonina nodadewabo.
Kafka elunxwemeni (MAXI)
Kwelinye icala, kwaziswa uSatoru Nakata, indoda endala eyayihlala amava angachazekiyo ebuntwaneni bayo. Ngokukodwa, waphulukana nokuqonda kwaye ekuvukeni kwakhe waphulukana nenkumbulo kunye namandla okunxibelelana, ukongeza: wayenokuthetha neekati. Ngesi sizathu, wagqiba kwelokuba anikezele ngobomi bakhe ekuhlanguleni i-felines kuyo yonke indawo kwaye wadibana nomlinganiswa ogama linguJohnny Walken, onxulumene neekati.
Ukufika kwakhe eTakamatsu, uKafka Tamura wafumana indawo yokuhlala kwithala leencwadi. Apho, UNksk. Saeki (umlawuli) kunye no-Oshima, banceda umlinganiswa ophambili. Emva koko, uKafka Tamura uneendlela ezinomdla ngaba bantu, efumanisa e-Oshima umthombo wezityhilelo ngaye.
Emva kwexesha, uNakata ufumanisa ukuba uJohnny Walken uyindoda engendawo ebulala abantu ababhinqileyo. Ngenxa yoko, ulwa naye ade amoyise (ngoncedo lweekati). Emva koko, indoda enkulu idibana noTamura eTakamatsu ngokungena kwinqwelomoya ekhethekileyo. Ke, ngokulandelelana, Ubomi bawo onke amalungu ebali ayadityaniswa ngaphandle kwengcaciso engaphezulu de kube sekupheleni kwencwadi.
Uhlalutyo Kafka elunxwemeni
Ukufaneleka kwesindululo sakho soncwadi
Ingxelo yenoveli Kafka elunxwemeni zama ukujoyina iindlela ezininzi, kubonakala ngathi kude komnye nomnye, ukwalathisa umsonto weziganeko. Ngale ndlela, umdla wokufunda uyanda njengoko amabali angahambelaniyo ecaciswayo.
Kwimeko yale noveli, kunokuba nzima ukuqonda isizathu sokutshintshisiswa kwamabali amabini-ekuqaleni-ahlukaniswe. Ngaphandle koku, abafundi banamathela kufunda malunga nokuqhubeka kweziganeko ezinomdla kunye nexhala labalinganiswa abasondeleyo. Ekugqibeleni, kukho indlela engummangaliso yokubeka amabali ndawonye, ​​usebenzisa umbono.
Inoveli phakathi komlingo kunye nokwenyani
Ngokwesiqhelo, Uncwadi olucetywe ngu UHaruki Murakami kubandakanya umdibaniso wamacala amabini oqulethwe kwiyunithi enye yobuhle. Ngamanye amagama, indlela eya ebalini inokuqhubela phambili ukusuka kwingxelo yokwenyani yokwenzeka kwiimeko ezingaphaya kwendalo, ngaphandle kwengxaki. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba imicimbi emnandi iphele ithathwa njengenyaniso.
Elinye icandelo elibalulekileyo lichaze ingxelo yombhali waseJapan njenge "pop yenoveli", kubandakanya izingqinisiso ezinokuthenjwa (iimpawu zorhwebo, umzekelo). Ngaxeshanye, inyaniso ijijekile kancinci kancinci ngenxa yokubuza imibuzo engenakwenzeka. Ixesha lamva sisixhobo uninzi olukhankanyiweyo malunga noMurakammna, bobabini abachasi bakhe kunye nezigidi zabalandeli bakhe.
Imixholo enzulu yabantu
Njengakwezinye ba thengisi Umbhali waseJapan, Kafka elunxwemeni Inobunzima be-thematic (paradoxically) ekulula ukuyifunda. Kule ndawo, indlela yokujongana nemiba ebalulekileyo ebantwini (uthando, isizungu, uxinzelelo ...) ibaluleke kakhulu ukuze ubambe umfundi.
Ngapha koko, ibali ngalinye, nokuba linokuntsonkotha kangakanani na, libonisa uxinzelelo olubonisa ukuba wedwa kwaye uyedwa (Satoru Nakata) kunye nendlela yokuphuma. Ngelixa, Umxholo wobudlelwane bosapho kunye neziphumo zokungaziva kwindawo yakho de ushiye (Kafka Tamura), yalatha kubomi bomntu uqobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Kafka elunxwemeni